Ukulahla eceleni isicwebezelisi ngokweqile ezikhungweni sibukeka kahle "Belfast Pub" baba samuntu emzaneni bendabuko ezinkantini ehlakazekile emigwaqweni komnikazi Irish. Olunothile pub esimweni esinjena nendawo esikuyo esiyingqayizivele.
Yayisekelwe Kuyinkolelo-ze ukuphumula kule ndawo iyaduma ngaphezulu. I Pub Irish amuncekela umphakathi, okuyinto owazi intengo kabhiya kakhulu, eqotho, akukho fancy frills Ungadla futhi enomsindo bahlele imihlangano enobungane.
Ikheli isikhungo "Belfast pub": Moscow, Novokuznetsk, Ephakathi Ovchinnikovsky Lane, ibhilidi 1, Ukwakha 13. Ngaphambi bar, okuyinto esezinzile enhliziyweni kwesihloko, esifundeni CAO (Zamoskvorechie) uthole on the esitimeleni.
Kusukela ngaphansi komhlaba ukuze ubhiya imizuzu 5 ukuhamba. Lapho befika esiteshini "Novokuznetskaya", izivakashi beze Ovchinnikovsky yashayisa unqenqema, futhi uphokophele ekufezeni "umkhomo" lezinyawo. Lesi sakhiwo, okuyinto iyisonto yokudlela, elise okuphambene kwebhuloho.
Bar Belfast-Pub has a real lezwe Irish umoya wokungenisa izihambi futhi cordiality. Ophahleni lihlotshiswe imishayo omkhulu Smoky izinkuni okuqinile. Ngokusho izindonga anolaka acakiwe ahlotshiswe izithombe, okuyinto ayeveza namathafa ka ezweni lesethembiso, emaweni guys Irish, ngesihluku Ezivamile British kanye ibha.
On emashalofini, zikhathi ezimnyama, ukubeka amaqembu izinto zobungoma ezemidlalo, okuyiwona wonke umphefumulo iyagula pub elite, nezimpahla siqu izivakashi njalo. Alumelayo "Belfast Pub" (eMoscow) lihlotshiswe amabhanela amaqembu efanayo ozithandayo kanye shamrocks.
Induduzo yokudlela ne nethimba yasekuqaleni esivela ubhiya zakudala, unamathisele eceleni kwemigwaqo Irish, okwenza ngokhuni ifenisha kanye itshe izindonga. inkampani Friendly kahle wahlela ukuba itafula elikhulu omkhulu amabhentshi esindayo futhi indle.
Isibhakabhaka, emoyeni ezinkantini zasemakhaya, lapho umfula othela foamy isiphuzo, kumnandi, umsindo, ingxoxo kanye umculo okhalela phezulu abayekanga umzuzu owodwa isekela umculo wangemuva ezifanele - Melodies Irish-Folk.
A ezahlukene eliphezulu ubhiya, ale ne-stout - ibha ikhadi lebhizinisi. Izivakashi ziya etotoswayo ne edume izinhlobo amnyama ayizidlakela Irish. Izivakashi eziningi ukujabulela unfiltered ubhiya German. Ngaphezu kwalokho, "Belfast pub" - ubhiya, enganikeza ukunambitheka ale Scottish.
Nemudrenyh sokudla okwehla esiphundu ngokumangalisayo elimnandi abahlanganisa abeLungu, Russian futhi yebo, ukudla okuhlukahlukene Irish kubangele injabulo njalo omphakathi ogogobele kwa enkantini. Waphatha Sebawoti amasaladi, izitsha efudumele emangalisa nososo enongiwe, isobho. Anikeza isidlo esikhulu ukuze sibikezele iziphuzo frothy.
Izivakashi Awukwazi ukushiya "Belfast Pub" akusho ukujabulela zakudala ithimba halophytes, sikadali Irish "Pot Leprechaun", ingulube loin chops, amazambane liyakhazimula, inyama ekhatsi Dublin, isoseji inyama, isaladi efudumele Irish, izimfanzi zihambisana ubhekeni, ushizi amabhola nezinye okukhona.
Izici inkonzo enkantini
Service in the pub lakhiwa ekuqaleni. Izidlo kwimenyu enkulu emva oda kuletha oweta emincanyana. Ngesikhathi esifanayo self-service iziphuzo anikezwa. Uma izivakashi ufuna ubhiya noma ale, baya bar, oda iziphuzo, bese ukhokha bebodwa ukuba itafula lithwalwe ngazo.
Kulabo abathanda izinkampani ezinomsindo, umculo okhalela phezulu futhi uyaqonda okuningi ngalokhu ubhiya kwenza umbono omuhle "Belfast pub." Amazwana ngalokhu ibha, ebuswa umoya of England ezimnandi zakudala, ikakhulukazi omuhle. Ngokusho ukubuyekezwa, ke ubhiya - esihle, ukudla - kakhulu, nakuba, futhi akukho frills. Zonke ngamanani akhokhelekayo.
Lesakhiwo kuyinto umoya kumnandi Amazing kanye ubunye imiphefumulo. Lapho ibha iqala ukuzwakala ingoma ethandwa, okubandakanya kancane kakhulu kunabanye nezinye amathrekhi ehholo isifika umcimbi Amazing - umphakathi synchronously eshaya emibuthanweni noma izandla phezu omkhulu phezulu wokhuni.
Lapha, emkhathini ngesihluku Ephakathi, ngokusebenzisa umsindo madoda anamandla abuthana angena bamemeza ubhontshisi. Futhi ngaphansi kwesimo ngokushesha ukubungaza amaqembu ngezikhathi kuphakama uhlamvu ezimibalabala, onokhahlo guy Irish - Ukuphatha ngokuphimisa uthukuthele ngobuso bakhe, isibhamu, kanye umshiza. Futhi lokho kuyiqiniso - Republic of Ireland ...
Futhi ukuthi kukhona kwangijabulisa, ukuthi bonke abantu bangabafowabo bomunye. izindawo ezinjalo, lapho imiphefumulo yabantu iyahlanganiswa ibe yomkhakha owodwa, hhayi okungaka. Izivakashi enisezweni "Belfast pub" ngokokuqala ngqa, kubonakala sengathi base phezu emihlanganweni yomshoshaphansi ihlelwe nabangane bakudala. Noma kunjalo, ungazizwa sengathi abangabazi kule inqwaba. Bathulula ngokushaja omuhle lwesintu.
Ibha zithandwa kakhulu kangangokuba itafula ngaphandle ukubhuka it has cishe akukho ithuba uthole khona. Futhi izihlalo ncwadi Ezivamile ukuncoma izinsuku 3 ngaphambi vakashela. Ngakho-ke, le ethile kuphela lesikhungo umphakathi ubona indawo encane nenani elincane amathebula.
NgoLwesihlanu, pub ngampela ingu ndawo apula bawe, futhi ibha kunzima emikhukhwini eminyene. Umugqa ngilangazelela uphumule Belfast-Pub oqhubeka ukupha, kunalokho, kwandisa ngosayizi. Futhi ungathandi endaweni yokucima ukoma kuphela kulabo ukhetha ukungatholi jolly ezinkampanini gomonyaschih futhi izinkulumo obunokuthula nabanye ukuze nje itiye IsiZulu prim.